Dadkii ugu badnaa ee Maraykan ah oo iska celiyey dhalashada dalkaasi & sababaha ugu waawayn oo la sheegay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dadkii ugu badnaa ee Maraykan ah oo iska celiyey dhalashada dalkaasi &...
(Washington, DC) 10 Agoosto 2020 – Tiro rikoodh jebis ah oo Maraykan ah oo muujinaysa dadka iska celinaya dhalashada Maraykanka ayaa soo baxday, sida ka muuqata daraasad cusub oo soo baxday.
In ka badan 5,800 oo Maraykan ah ayaa iska celiyey dhalashada Maraykanka 6-dii bilood ee ugu horreeyey sanadkan 2020 oo qura, taasoo laba laab ka badan tiradii sanadkii hore oo ahayd 2,072 oo qof oo iska celiyey 2019, sida ay sheegeen Bambridge Accountants, oo ah sharikad New York-fadhida oo haysa xisaabta canshuurta ay bixiyaan Maraykanka dibed joogga ah.
“Inta badan waa dad ka tegey Maraykanka oo go’aansaday inay intani ku filan tahay,” ayuu yiri Alistair Bambridge, oo la shaqeeya Bambridge Accountants, lana hadlayey CNN, isagoo sheegay inay dadku neceen MW Donald Trump, sida loola xaalay cudurka coronavirus, iyo guud ahaanba siyaasadda Maraykanka ee iminka.
Balse, waloow ay qaar badani ka cowdeen cimilada sumaysan ee siyaasadda Maraykanka, misna qaar kale ayaa dhalashada iska dhiibey arrimo kale.
Tusaale, dadka Maraykanka ah ee dibedaha ku nool ayaa canshuur laga doonayaa sanad kasta, waxaa sidoo kale laga rabaa inay soo diiwaan geliyaan koontooyinkooda, maalgelinnada ay sameeyeen iwm.
Qofkii ka tanaasulaya dhalashada Maraykanka ayaa laga doonayaa inuu bixiyo lacag dhan $2,350 isla markaana uu tago safaarad uu Maraykanku leeyahay haddii aanu qofku dalka joogin.
Daraasadda ayaa sheegtay inay tiradu sii kordhi doonto, waloow ay dadku eegayaan waxa dhaca doorashada Nofeembar oo haddii markale Trump la doorto aysan arrintu caga badnaan doonin.
MW Somalia ayaa ka mid ah dadka iska celiyey dhalashada Maraykanka.
Previous article3 arrimood oo uu wajihi doono RW cusub ee lasoo magacaabo & natiijada ka dhalan karta
Next articleQorshe ay Jubbaland ka fulisey Wasaaradda Caafimaadka DF Somalia oo aad loo amaanay (Ma taqaan EWARN?)